Par Taratra sur 19/01/2021
Antapitrisany maro ny akoho amam-boroana (gana, gisa, vorontsiloza…) tsy maintsy vonoina any Eoropa sy Azia, noho ny aretina “grippe aviaire” avy amin’ny tsimokaretina H5N8. Mbola sarotra ny hilazana amin’izao fotoana izao fa tonga faratampony ny tarehimarika hita amin’izao fotoana izao, 3,72 tapitrisa ny any Eoropa. Mba hisorohana ny fifindran’ny valanaretina amin’ny fiompiana hafa ny tanjona amin’izao famonoana akoho amam-borona izao any Eoropa sy Azia izao.
Voalohany maneran-tany eo amin’ny toekarena ry zareo Sinoa ny taona 2020, araka ny vaovao hita navoakan’ny tranokala maro. Hatrany amin’ny taona 2030 izany tanjak’i Sina amin’ny toekarena izany, araka ny fanadihadiana hita amin’ny tranokala Outre–Atlantique. Milahatra miaraka amin’ny Sinoa amin’izany lafiny toekarena izany ny firenena maro any Azia. Nihemotra aoriana i Etazonia, nitana lohalaharana hatramin’ny taona maro.
I Côte d’Ivoire izao no nahitana fisondrotana haingana eo amin’ny toekarena aty Afrika, araka ny fanadihadiana nataon’ny Doing Business, navoakan’ny Banky iraisam-pirenena. Tany amin’ny laharana faha-167 eran-tany i Côte d’Ivoire tamin’ny taona 2012, tonga eo amin’ny 110 tamin’ny 2020. Efa resin’ity firenena ity izao i Kenya. Côte d’Ivoire izay firenena mampiasa teny frantsay tsy misy atao amin’ny harena an-kibon’ny tany. 2 286 dolara izao ny PIB isan’olona any aminy. Resiny ihany koa ankehitriny i Ghana sy i Nizeria any amin’ny faritra Afrika Andrefana.
Manomboka amin’ity taona 2021 ity, tsy mijanona fotsiny amin’ny fiarovana ny fanampiana entin’i Rosia any Soudan, fa hivarotra zezika ihany koa. Ao ambadik’izany ny hidirana amin’ny tsenan’ny zezika aty Afrika, hampandroso ny fambolena. Orinasa roa lehibe any Rosia no tompon’ny famatsiana: ny Uralchem sy ny Uralkali, samy orinasam-panjakana rosianina. Ny tompon’andraikitra ambony any Soudan, ny filoha sy ny praiminisitra, samy nandray ny avy amin’ny filankevi-pitantanana amin’ireo orinasa ireo. Hanampy an’i Soudan amin’ny fambolena i Rosia.